Shiinaha shiidi shirayaasha saarayaasha iyo shirkado | BBMG
qaybta dayactirka boodhka
Soosaarayaal Xirfadleh ...
11kV-1100kV saldhiga porcela ...
Heerka Waxyaabaha GB, EN, DIN, ASTM, GOST, JIS, ISO
Qalabka Waxsoosaarka Been abuur, Jaajuus, Alxanka
Daaweynta kuleylka Neefsiinta, Caadaynta, Q & T, Adkaynta Induction
Dulqaadka Mashiinka Ugu badnaan 0.01mm
Qalabaynta Mashiinka Ugu badnaan Ra 0.4
Saxnaanta Ilkaha Ugu badnaan Fasalka ISO 5
Miisaanka / Cutubka 100kgs - 60 000kgs
Codsiga Macdanta, Sibidhka, Dhismaha, Kiimikada, Qodista Saliida, Mashiinka Birta, Sonkorta Warshadda iyo Warshadda Tamarta
Shahaadada ISO 9001
Hore: Saxaafadda Roller
Xiga: Burcad toosan
Mashiinka sibidhka ayaa ah qalabka lagu shiido waxyaabaha ceyriinka ah ee sibidhka. Mabda'a shaqada sida soo socota: alaabta ceeriin waxaa lagu quudiyaa marinka quudinta ilaa seddex isku xigta oo hawo-mareen ah, iyo marinka quudinta wuxuu ku fidaa gudaha gudaha mashiinka iyadoo loo marayo dhinaca kala-sooca. Qalabku wuxuu ku dhacaa bartamaha maqaarka shiidi saameynta culeyska iyo socodka hawada. Mashiinka wax shiidaya wuxuu si adag ugu xiran yahay yareynta oo wuxuu ku wareegayaa xawaare joogto ah. Xawaaraha joogtada ah ee qosolka ...
Mashiinka dhuxusha JGM2-113 waa nooca xawaaraha dhexdhexaadka ah ee dhuxusha. Qaybaheeda jajabka ah waxay ka kooban yihiin giraan wareeg ah iyo 3 rolleyaal wax shiida oo ku rogmada giraanta wax lagu shiidayo, rolleyaashana waa la hagaajiyaa mid walbana wuxuu ku dul wareegi karaa dhidibkiisa. Dhuxul ceedhinka ceyriinka ah wuxuu kudhacayaa giraanta wax shiidaya ee ka timaadda marinka dhuunta dhuxusha ee dhagaxa weyn iyo giraanta wax shiidaya ee wareegeysa waxay dhuxusha dhuxusha u dhaqaajineysaa wadada giraanta wax lagu shiido iyadoo la adeegsanayo xoogga xoogagga sanduuqa. duub ...
Saxaafadda duubista ayaa ah qalabka wax lagu shiido ee cusub oo la soo saaray bartamihii 1980-kii. Tiknoolajiyadda cusub ee soo saarista iyo wax shiidaya ee inta badan ka kooban waxay saameyn muuqata ku leedahay keydinta tamarta, waxayna si weyn isha ugu heysaa warshadaha sibidhka ee caalamiga ah. Waxay noqotay tikniyoolajiyad cusub oo ku saabsan horumarinta farsamada shiida. Mashiinka wuxuu qaataa mabda'a shaqada ee isticmaalka tamarta hooseeya ee lakabka maaddada cadaadiska sare leh wuxuuna qaataa habka shaqada ee halbeegga walxaha hal ...
JLMS rullaluistemadka waxaa loo isticmaalaa ka hor-shiidi ee clinker sibidhka. Mabda 'shaqeynteeda ayaa ah: clinker wuxuu ka galayaa dhagax-tuurka bartanka xarunta: maaddadu waxay ku dhacdaa bartamaha qalabka wax lagu shiido ee culeyska. Mashiinka wax shiidaya wuxuu si adag ugu xiran yahay reducer wuxuuna doortaa wareegga xawaare joogto ah. Wareegtada-xawaaraha joogtada ah ee qalabka wax lagu shiidiyo wuxuu si siman oo siman ugu qaybiyaa alaabada dhulka dushiisa saxanka daloolinta, halkaas oo nooca taayirka ee shiidaya rullaluistemadka qaniinyada ka ...
Mashiinka toosan ee ceeriin waa nooc ka mid ah wax lagu rujiyo oo lagu qalabeeyo 4 rollers. Mashiinka wax lagu shiido, cududda dhagaxa, qaabdhismeedka taageerada iyo nidaamka haydarooliga ayaa ka kooban unugga awoodda wax shiida, kaas oo loo qaybiyay 4 koox isla markaana loo habeeyay hareeraha mashiinka wax shiida. Aragtida farsamada iyo dhaqaalaha, mashiinka qaawan ee qaawan waa qalab wax lagu shiido oo aad u horumarsan, marka la barbardhigo qalabka wax lagu shiido ee dhaqameed, wuxuu leeyahay faa iidooyinka soo socda: ―Waxaa loo isticmaali karaa in lagu shiido waxyaalo kala duwan ― Yaryar ...